Tonga teto Madagasikara ny salezianina tamin'ny 1981, nentanin'ny hafanampon'ny "Projet afrique", ary avy hatrany dia nisongadina tamin'ny fitrandrahana ny sehatry ny Serasera.
Folo taona tato aoriana dia nitsiry ny hevitra hanao Radio, ho fitaovam-pitoriana ny Vaovao Mahafaly sy fampivoarana ny ara-tsôsialy. nteraka ny nofinofy nony neken'i Mômpera Luigi Zuppini lehiben'ny Fikambanana sy ny filànkeviny ny faniriana hanao Radio. Voatendry ho tale voalohany i Mômpera Luca Treglia, nanampy azy niandraikitra ny fanofanana ny ho mpandraharaha i Mômpera Rosario Salerno.
Raikitra fa "RADIO DON BOSCO" no hatao anarany ho fankasitrahana an'i Masindahy Joany Bosco mpanorina ny Fikambanana Salezianina. Ny teny faneva "Plus je l’écoute, plus je l’aime", dia manambara mazava ny fanamby avo lenta hametrahana ny Radio Don Bosco ho Filamatra eto an-drenivohitr'Antananarivo. ("Arakaraka ny hihainoako azy no itiavako azy").
Niverina indray ny volana marsa 2006, ary talen'ny Radio Don Bosco mandraka ankehitriny, i Mômpera Luca Treglia.